Top 5 Cities divay In Eoropa sy ny fomba ahatongavana any | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Cities divay In Eoropa sy ny fomba ahatongavana any
(Last Nohavaozina: 17/01/2020)
Divay tena rehetra dia mahafantatra fa tia divay tanàna any Eoropa manolotra takatry ny divay sy mahagaga. From Frantsa any Italia, ary koa, ireo no amantarana firenena maro mba manana divay tsara indrindra eto an-tany.
anisan'ny, izany no tsara indrindra noho ny rivo-piainana mitombo fepetra, fa mbola ho kanto. Tsy izay rehetra mahalala ny fomba hanaovana ny divay matsiro indrindra.
Mahalala fa tia divay toerana sasany dia somary sarotra ny hanatratra lamasinina araka izay miorim-paka ao amin'ny ambanivohitra. Soa ihany, Eoropa Andrefana Manana tanàna maro izay afaka manolotra anao mbola divay tsara indrindra any Eoropa. Plus, dia tsy maintsy ho manahirana ny tenanao Hianao hahita ny fomba hahatongavana any izy ireo, toy ny rehetra ireo dia azo idirana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Raha ny piandohana no akory va ny firenena lehibe any Eoropa, ianao manana fotoana mora mahazo any.
Rehetra izany ao an-tsaina, andeha hojerentsika ny farany lisitry ny divay tsara indrindra tanàna any Eoropa sy ny fomba hitsidika azy ireo lamasinina.
Indrisy tsy fantatry ny olona rehetra, ny Reniranon'i Rhin Valley any Alemaina feno kalitao tanim-boaloboka. Izy ireo mamoaka ny tsara indrindra amin'ny divay rehetra Alemaina, ary ny ankamaroan'izy ireo dia tonga Koblenz.
Io tanàna kely lainga amin'ny renirano Rhin, ary manome ny sasany amin'ireo divay tsara indrindra trano fisotroana sy trano fisakafoanana any amin'ny faritra. Tena tsara tarehy indrindra, Tsy mba tahaka ireo tanàna lehibe hafa ao amin'ny faritra.
Ny tanim-boaloboka ao amin'ny faritra dia malaza izao tontolo izao fa manana ny tsara indrindra Riesling divay. Raha manapa-kevitra ianao te-hitsidika ny tanàna Toerana mahafinaritra ny Koblenz, dia tsy maintsy miezaka iray vera na roa mangatsiaka divay fotsy.
Mahazo ny Koblenz dia tena mora, tahaka ny manana iray amin'ireo tsara indrindra toerana rehetra ny Rhin divay Valley tanàna. Fa nisasaka roa lehibe tanàna Alemaina - Cologne ary Frankfurt, ary fifadian-kanina ireo fiarandalamby mankany Koblenz from roa. Inona koa, ny tanàna lainga amin'ny Toerana mahafinaritra mpandalo Rhin Valley fiaran-dalamby lalana.
Amin'ny farany, ny tanàna dia somary manakaiky ny sisin-tany amin'ny Pays-Bas, Belzika, Luxembourg, sy Frantsa. Izany dia midika hoe anao dia tsy hisy olana nahita ny fiaran-dalamby avy any amin'ireo firenena ireo ihany koa.
Berlin ho Koblenz Lamasinina
Frankfurt ho Koblenz Lamasinina
Luxembourg ho Koblenz Lamasinina
Stuttgart ho Koblenz Lamasinina
Vienna Tsy fotsiny teo amin'ny tanàna tsara indrindra mba hiaina ao; izany ihany koa teo amin'ny tanàna divay tsara indrindra any Eoropa. Ny firenena mamokatra divay be amin'ny ankapobeny, ny ankamaroany izay avy amin'ny tanim-boaloboka teny an-dohasaha Danube. Vienna mihitsy no iray amin'ireo vitsy izao tontolo izao kapitaly izay mamokatra divay ao an-tanàna.
Izany rehetra izany dia midika fa dia hanana ny fahafahana hanandrana divay tsara indrindra ny firenena tsy maintsy atolotra, mahitsy eo Vienna. koa, Tokony ho fantatrao fa ny siny hoditra ny divay hankafy dia Weissburgunder.
Vienna no renivohitry ny Aotrisy ary iray amin'ireo tanàn-dehibe any Eoropa, midika haingana ianao tonga any lamasinina. Izany no foibe lalamby foiben'ny izay manana fifandraisana amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina maro.
Ny mazava pick for Top 5 divay tanàna any Eoropa no Bordeaux, Frantsa
Ireo aminareo divay tsara, fantatrareo fa Bordeaux any Frantsa no iray amin'ireo tena fantatra divay kapitaly 'izao tontolo izao. Izany no hoe nahoana no amin'ny lisitry ny divay tsara indrindra tanàna any Eoropa. Ny divay rehetra atao amin 'ity faritra malaza mivoaka any an-tanàna mba ho tia.
Bordeaux divay dia malaza noho ny mineraly sy ny voankazo-tsoratra, from tarta vokatry ny voankazo masaka mamy. Divay ireo koa ny fahaizana mahagaga ny fahanterana tsara. Matetika ny mpanao mamela azy ireo am-polony taona maro taona.
mazava ho, tsy voatery manandrana divay antitra izay nampisy fiantraikany ny harena mba hiaina ny faritra tsara indrindra divay. Maro ireo takatry ny divay miaraka amin'ny vidiny miavaka-danja tahan'ny. Ny divay ambony tokony hiezaka eto dia Red Bordeaux.
Fitoriana ny tanàna dia tsy ho olana, na aiza na aiza ianao hita ao Eoropa Andrefana. Inona koa, ny ankamaroan 'ny fiaran-dalamby tsipika mankany Bordeaux tolotra fiarandalamby haingam-pandeha. Ho afa-tsy ora vitsivitsy mila mba tonga tao an-tanàna avy na aiza na aiza any Frantsa. Ny fiaran-dalamby avy any Paris tonga Bordeaux Tsy ampy 3 ora!
Toulouse any Bordeaux Lamasinina
Paris ho any Bordeaux Lamasinina
Lyon any Bordeaux Lamasinina
Marseilles ho Bordeaux Lamasinina
Florence, Italia no farany divay Cities in Eoropa
Ny kavim-Tuscany, raha tsy izy rehetra Italia, Florence no tanàna tonga lafatra miaraka amin'ny divay tsara indrindra ao amin'ny firenena. Misy tanàna maro manodidina ny tanàna izay mamokatra ny divay sy Sangiovese mahafinaritra izy rehetra mba mendrika ny ho ao amin'ny lisitry ny divay tanàna any Eoropa. Ireo tanàna tsara tarehy sy ny manaitra italianina anatiny dia mafy hanatratra, fa ny tanànan 'i Florence fa tsy.
Afaka tonga ny tanàna lamasinina avy na aiza na aiza any Italia, na koa, toy ny Soisa sy Frantsa. Misy tapaka, fiarandalamby haingam-pandeha izay mandeha imbetsaka isan'andro avy any Milan sy Roma, fa koa avy Venice. Ireo nivezivezy maka latsaky ny adiny roa, ary mahazo ny fahafahana hahita ny tsara tarehy sy ny havoana sahan'i Italia.
Dia toy izany ianareo vonona ny hankafy divay tanàna any Eoropa? SaveATrain.com Hanampy anao hahazo ny tanàna misy ao Eoropa, fifadian-kanina, levitra ary tamim-pitsikiana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/wine-cities-europe/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#bestwine europeantravel europetravel Tranride fiarandalamby traintip Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly divay
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Sept-pahatonga ny taona 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Mey 2021Jun 2021Jul 2021Aog 2021